December | 2016 | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
After 130 years of obscurity, Myanmar’s forgotten royals makeacomeback @ https://www.theguardian.com/world/2016/dec/30/myanmar-burma-royal-family-monarchy-king-thibaw-comeback
Soe Win, the great-grandson of the last king of Burma, now Myanmar. ‘From when the British took over, we lost our identity.’ Photograph: Handout
Bama soldiers torturing Rohingyas မြန်မာအစိုးရက ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းတွေ မလုပ်ပါဘူးလို့ငြင်းမလား?
December 31, 2016 January 1, 2017 drkokogyi
မနေ့က တင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဇော်ဌေးက ဘယ်နေရာမှာ ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ စုံစမ်းရမယ်လို့ The Voice ကို ပြောထားတာ တွေ့လိုက်တယ်။
အဲဒီဗီဒီယိုကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၅) ရက်နေ့မှာ ရသေ့တောင်မြို့နယ်၊ ကိုးတန်ကောက်ကျေးရွာမှာ ရိုက်ကူးထားတာပါ။
ကုလသမဂ္ဂဌာနေကိုယ်စားလှယ်နဲ့ သံတမန်တွေ ကိုးတန်ကောက်ရွာကို သွားတော့ ရွာသားတွေ အားလုံးက စာရွက်တွေကိုင်ပြီး ဆန္ဒပြကြတယ်။ အဲဒီအတွက် ရွာသားတွေအားလုံးကို နိုဝင်ဘာလ (၅) ရက်နေ့နဲ့ (၆) ရက်နေ့ နှစ်ရက်လုံး ဗီဒီယိုထဲမှာ ပါတဲ့ အတိုင်း ရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တာလို့ ပြောရင်လည်း မှန်ပါမယ်။
မြန်မာအစိုးရက ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းတွေ မလုပ်ပါဘူးလို့ငြင်းမလား?
My comment: IF DASSK dare to deny this torture, I want to ask her again after KICKING her face.
I would not kick her withaboot but with my bare foot because I am not cruel like Bama soldiers.
And I promise not to use force.
OPEN LETTER TO THE PRESIDENT OF THE UN SECURITY COUNCIL AND MEMBER COUNTRIES OF THE COUNCIL TO END THE HUMAN CRISIS OF ROHINGYAS IN MYANMAR
Watch: A Message on International Flotilla & Humanitarian Mission to Arakan
Watch: A Message on International Flotilla & Humanitarian Mission to Arakan.